Wholesale 8ft & 9ft ukanyatsotarisisa peeling mutsara Mugadziri uye mutengesi | Kusanganisa
Iyo 8ft peeling muchina inotengeswa zvakanyanya kuTurkey, Indonesia, Russia neUS nedzimwe nyika. Yakave ichirumbidzwa kwazvo nevatengi vese ava. Tine zvitupa zveEC. Uye SGS ichagoverwa kana mutengi achida.
1.Iye mbiri roller kutyaira system yakawedzera tekinoroji mumusika.
2.Uye iyo yekudyisa screw inonyudzwa iyo isingazokuvadzwa nemarara uye huni machipisi. Mafuta ekuzora anongoda kuwedzera kamwe chete pagore, chengetedza mafuta ekuzora. Iyo guruva uye veneer machipisi haizokwanise kunamatira muchidimbu chekudyisa, icho chisingazokonzere kudzikisira muchina.
3.Both divi rinotungamira njanji mahwendefa ari munzvimbo yakaenzana uye kudzimisa tekinoroji kunoita kuti njanji iome uye inoita makore akasimba asagumi.
4.Our imwe patent inoshanda ndeye kushandisa isina waya kure kudzora mashandiro emuchina mukati meiyo 500m, kuitira kuti vashandi vave nenzira iri nyore uye yakasununguka yekushanda.
5.Muchina unotora PLC yekudzora system, Siemens servo mota, Schneider magetsi zvikamu, kuvimbisa muchina unomhanya chaizvo. Uye zvakare, muchina une otomatiki ndangariro basa, imwe kiyi yekudhindisa kuti udzokere kumafekitori, kunyangwe basa risiri iro rinogona kugadziriswa nekukurumidza, harizononoke kugadzirwa kwako.
6.Nebasa rekugadzira chidimbu chekupedzisira chidimbu, inobvumira danda rimwe nerimwe kuti riwane imwe chidimbu chevhenekeri, ichinyatso kuvandudza gohwo rekuwedzera uye purofiti yekudzoka.
Pashure: 4ft ukanyatsotarisisa kugadzirwa mutsetse
Zvadaro: kumucheto kucheka saha